Ko hutano muUK hunoshanda sei?
Dai 19, 2022 Demi utano, UK
Vasiri vagari vemuEngland kuti vasunungure rubatsiro rwechimbichimbi kuzvipatara zveNHS UK. Iyo National Health Service ndeimwe yeakanakisa hutano masisitimu pasi rose. Asi, zvichienderana nenyika yako yekumba, unogona kuzvidavirira kune imwe mari. United Kingdom yakaita
Nzira yekudzidza sei muUganda? Mayunivhesiti muUganda
Dai 14, 2022 Demi kudzidza, Uganda
Unogona kutsvaga yunivhesiti kuUganda kwaungade kudzidza. Kudzidzira hakudhure. Iwe une dzakasiyana siyana sarudzo dzeakapedza kudzidza uye postgraduate zvidzidzo. Dzidzo yekuUganda inodhura zvishoma. Kuenzaniswa nezvimwe zvikamu zve
Zvinodhura zvakadii kuenda kuColombia?
Dai 14, 2022 Demi Korombiya, famba
Kana iwe uchitsvaga bhajeti yekuenda kwerwendo, Colombia inokodzera bhiri. Colombia inogona kunge iri imwe yenyika dzakachipa dzatakafamba asi hazvireve kuti haudi sekondi yega yega Kune nzvimbo dzakasiyana siyana,
Sistimu yedzidzo muDRC, Democratic Republic of the Congo
Dai 14, 2022 Demi DR Congo, chikoro
MuDemocratic Republic of the Congo, dzidzo yepuraimari inogona kupedza makore matanhatu. Chikoro chesekondari chinogona kutora makore anosvika matanhatu kuti apedze. Vadzidzi vese vanofanirwa kupedzisa bvunzo yenyika panopera sekondari. The
Ndeipi nzira yakanakisa yekutumira mari kune dzimwe nyika?
Dai 13, 2022 Demi Africa, Americas, Asia nePacific, Europe, mari
Mabhangi epasi rese anowanzo inzira yakanaka yekuendesa mari. Iyi nzira ndiyo yakachengeteka zvakanyanya, inokurumidza, uye yakachipa kupfuura mari, maodha emari, kana makadhi echikwereti. Kwete mabhanga chete asi makambani ekufambisa mari anobatsira nekufambisa kwemabhanga epasi rese. Saka isu
Nzira yekudzidza sei kumayunivhesiti eNorway?
Dai 12, 2022 Demi Noweyi, kudzidza
Iyo yekubvuma uye kunyorera maitiro muNorway yedzidzo yepamusoro kuburikidza nesangano rega rega kana kuburikidza neNUCAS. Maitiro emasangano ane zvakasiyana zvinodiwa uye nguva dzekupedzisira. Usati watanga hurongwa unofanirwa kuwana ruzivo rwese rwunodiwa. Ngazvive izvo
Ungawana sei vhiza kuGhana?
Dai 12, 2022 Demi Ghana, visa
Kuti uwane vhiza yekuGhana yekushanya kana yebhizinesi, unoda kushanyira webhusaiti yemumiriri weGhana padyo newe. Iwe haugone kuita zvese online panguva ino. Kune mazhinji maconsulates eGhana, unogona
Rwendo rweNorway runoita marii?
Dai 11, 2022 Demi mari, Noweyi, famba
Paavhareji mutengo wezuva nezuva wekuenda kuNorway i111 US Dollars, kana $, uye zvekudya i30 US Dollars, kana $. Avhareji mutengo wehotera kune vakaroorana i115 $. Rwendo rwakanyatsorongwa bhajeti ruchakubhadharira
Maitiro ekunyorera sei asylum muTurkey?
Dai 9, 2022 Demi vapoteri, Teki
Kuti uwane hupoteri muTurkey unofanirwa kuendesa fomu yekupotera. Directorate-General for Migration Management (DGMM) inogamuchira chikumbiro chako chekupotera. Vanhu vakatiza kana kusiya nyika yavo nekuda kwehondo kana kutambudzwa. Uye handikwanise kudzokera
1 2 3 ... 74 Next Posts»